Qaab samaynta, Wax taaj oo kale duritaanka, Qaybo caaga wax taaj oo kale - Mestech
Qaab samaynta iyo cirbadda la isku duro
MESTECH waxay leedahay nidaam wax soo saar caag ah oo dhameystiran.
Daawaha birta ee wanaagsan iyo qaybo sax ah oo sarreeya ayaa la heli karaa.
Badeecad cusub laga soo bilaabo bilowgii naqshadeynta illaa wax soo saar iyo suuqgeyn.
Waxaa jira kumanaan alaabood oo suuqa yaal, kuwaas oo si joogto ah loo cusbooneysiiyo maalin kasta.
Mestech waxaa la aasaasay 2009, oo ku taal Shenzhen, xarunta wax soo saarka warshadaha ee koonfurta Shiinaha. Mestech waxaa ka go'an inay soo saarto caag iyo qaybo caag ah wax taaj oo kale. Hadda waxaan u fidineynaa adeeggayaga nashqadeynta wax soo saarka, tuurista biraha loo dhinto, shaabbadda iyo makiinadda. Waxaan sidoo kale siinnaa macaamiisha adeeg hal-joogsi ah oo ka socda qaybaha illaa shirkii alaabta la dhammeeyay.
Qaybaha balaastigga ah iyo qaybaha birta ah iyo alaabada aan soo saareyno waxay daboolayaan goobo farabadan oo ay kamid yihiin Warshadaha, Caafimaadka, Elektaroniga, Elektrikka, Korantada, Qaybaha Gawaarida, Qalabka Guriga iyo Alaabada Macaamiisha. Waxaan si isdaba joog ah uga badinaa rajada macmiilkayaga anagoo xoojinayna dhamaan asxaabta lana abuuro dhaqan isku duubnaada hagaajinta, soosaarida caatada ah iyo iskaashiga silsiladda si loo hubiyo qiimaha ugu badan ee macaamiisheena.
Qaybaha caaga ah waxaa lagu sameeyaa iyada oo loo marayo qaabaynta qaabab kale oo wax lagu farsameeyo, kuwaas oo cabirkooda iyo shaqadoodu ay buuxinayaan shuruudaha naqshadayaasha. In kabadan 80% ee qaybaha balaastigga ah waxaa lagu shubay mideynta cirbadeynta, taas oo ah habka ugu weyn ee lagu helo qaybo balaastig ah oo sax ah. Qaybaha caagga ah ee la isku duro iyo alaabooyinka ayaa dhexgalay dhammaan dhinacyada firfircoonaanta aadanaha ...
Si aad ugu fiicnaato qaabeynta iyo soo saarista alaabada caagga ah, waa inaan fahanno noocyada iyo isticmaalka balaastigga. Caaggu waa nooc ka mid ah isku-jirka molecule sare (macrolecules) kaas oo lagu polymerized by isku-darka polymerization ama falcelinta polycondensation la monomer sida wax cayriin. Waxaa jira noocyo badan oo balaastig ah oo leh sifooyin kala duwan, laakiin way fududahay in miisaan khafiifa la yeesho, ...
Sanduuqa Caafimaadka ee Caaga ah (sidoo kale loo yaqaan sanduuqa dawada) ama sanaadiiqda caafimaad ee balaastigga ah, ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa isbitaalada iyo qoysaska. Tan waxaa loo isticmaali karaa in lagu keydiyo dawooyinka, qalabka caafimaadka ama loo qaado si loo arko bukaanka. Sanduuqa caafimaadka, sida magaciisu ka dhigan yahay, waa weel loogu talagalay keydinta daawooyinka iyo qalabka caafimaadka, oo la soo bixi karo loona isticmaali karo haddii ay dhacdo xaalad ...
Iyada oo la horumarinayo warshadaha casriga ah, waxaa jira waxyaabo caag ah oo aad u fiican. Isla mar ahaantaana, badeecooyinka balaastigga ah ayaa sidoo kale si ballaaran loogu adeegsadaa warshadaha kala duwan. Gaar ahaan, qaybo balaastik ah oo sax ah ayaa la isticmaalaa. Hadda aan idinla wadaagno tilmaamaha naqshadeynta iyo balaastiga qeybaha saxda ah. Kala soocida qaybaha balaastigga ah ee saxda ah: 1. Naqshadeynta pr ...